Nokia 2: နိဂုံးအသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုခဲ့သည် Androidsis
Nokia သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ် ဦး အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည် ဖင်လန်ကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိထုတ်လုပ်သူများ၏ပထမ ဦး ဆုံးလိုင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။ သူတို့ကအလယ်အလတ်အကွာအဝေးကိုအာရုံစိုက်ဖို့အများအားဖြင့်လောင်းကစားပြုပြီ။ သူတို့လည်းတစ် ဦး စတင်ခဲ့ကြနေစဉ် Nokia 8 လို high-end high-end.
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဖုန်းအများစုကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားပြီး၎င်းမှာအဓိကအားဖြင့်ရည်ရွယ်သည် အလယ်အလတ်နှင့်အနိမ့်အကွာအဝေး။ ကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းနှင့်ကောင်းကောင်းရောင်းနေသည့်စျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ အခုသူ့ အသစ်နိမ့်အဆုံးဖုန်း။ ဒါကဖြစ်ပါသည် Nokia က 2သီတင်းပတ်အနည်းငယ်ကြာ။ ကောလာဟလများအပြီးတွင်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
El Nokia2ကအာရုံစူးစိုက်မှုရရှိခဲ့သည် မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းမီဒီယာ၌တည်၏။ အကြောင်း စျေးအသက်သာဆုံးဖုန်း ကုမ္ပဏီ၏။ ၎င်းရဲ့ဈေးနှုန်းကိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးသော်လည်းအရာအားလုံးကယူရို ၁၀၀ အောက်သာရှိမယ်လို့ပြသထားတယ်။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး အလွန်လက်လှမ်းဖုန်း။ နောက်ဆုံးကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစက်၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုသိရှိနိုင်ပါပြီ။ ဖင်လန်ကုမ္ပဏီ၏ဖုန်းအားလုံးကဲ့သို့ပင်ဤအချိန်သည်စင်ကြယ်သော Android နှင့်အလုပ်လုပ်သည် အန်းဒရွိုက် 7.1.1 Nougat.
ဤဖုန်းတွင်၎င်းကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည် Qualcomm Snapdragon 212 ပရိုဆက်ဆာ, အလယ်အလတ်နိမ့်အကွာအဝေးများအတွက်ဒီဇိုင်းပရိုဆက်ဆာ။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ရှိလိမ့်မည် 1GB RAM နှင့် 8 GB Internal memory။ အတော်လေးကျိုးနွံသောစွမ်းဆောင်ရည်, ဒါပေမယ့်ဖုန်း၏စျေးနှုန်းကိုစဉ်းစားကျိုးကြောင်းဆီလျော်။
ဓာတ်ပုံကဏ္sectionတွင်ဤ Nokia2မှထူးခြားသည့်အရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့မမျှော်လင့်နိုင်ပါ ဖုန်း၏နောက်ဘက်ကင်မရာမှာ 8 megapixels ဖြစ်ပြီးရှေ့ကင်မရာမှာ5megapixels ဖြစ်သည်။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်တွင်ရှင်းလင်းသောအရာမရှိပါ။ အချို့သတင်းရင်းမြစ်များက၎င်းသည်၎င်းသည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည် ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင်အခြားသူများကဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုနေစဉ်5လက်မ။ အတည်ပြုပြီးတာကတော့ 720p resolution ပါ။
ဤ Nokia2သည်ထူးခြားသောနည်းဖြင့်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေသည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်၎င်း၏ဘက်ထရီတွင်ရှိသည်။ Nokia ရဲ့စမတ်ဖုန်းအသစ်မှာ 4.000 mAh ဘက်ထရီဒါကြောင့်သေချာပေါက်တစ် ဦး ရှိသည်လိမ့်မယ် ကြီးစွာသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်။ ဖုန်းကိုအစဉ်မပြတ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောသုံးစွဲသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။
ဒီကိရိယာကိုမျှော်လင့်ရသည် နိုဝင်ဘာလ၏တစ်လတစ်လျှောက်လုံးစျေးကွက်ဝင်တိုက်။ အဘယ်သူမျှမအတည်ပြုနေ့စွဲနေဆဲရှိနေစဉ်။ မကြာခင်သင့်ကိုတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် Nokia ဖုန်းအသစ်အကြောင်းမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Nokia2- ကုမ္ပဏီရဲ့နိမ့်ပါးတဲ့အဆင့်အတန်းကိုအတည်ပြုခြင်း